၀၄:၁၃၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၁၄ ရက်နေ့က မူ
Reverted 1 edit by 193.253.236.122 (talk) identified as vandalism to last revision by Mayor mt. (TW)
၀၉:၅၉၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၄ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၄:၁၃၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၁၄ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (Reverted 1 edit by 193.253.236.122 (talk) identified as vandalism to last revision by Mayor mt. (TW))
== သမိုင်းကlama!ြောင်း ==
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပထမဆုံးသမ္မတအဖြစ် အာမက်ဘင်ဘဲလားအား ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ ဘင်ဘဲလားအား ဗိုလ်မှုးကြီး ဘူပီဒီယင်းက ဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ၁ဝနှစ်ကြာပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အား ၁၉၇၆ ခုနှစ်၌ ပြဌာန်းကာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အား အကောင်ထည်ဖော်ရန် ရည်မှန်းခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ် စနစ်သစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ၌ ဦးဆောင်ခဲ့သော အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးသည် နိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော ပါတီဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဘူပီဒီယင်း ကွယ်လွန်သောအခါ ဗိုလ်မှုးကြီး ဘင်ဂျီဒစ် တက်လာသည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/211303" မှ ရယူရန်